M̀ Kwesịrị Ichewe Echiche Ịkwụsị Akwụkwọ? | Ndị Na-eto Eto
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kiluba Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
M̀ Kwesịrị Ịkwụsị Ịga Akwụkwọ?
Lee ihe ndị i kwesịrị ichebara echiche
Afọ ole ka iwu obodo unu kwuru mmadụ ga-agụru akwụkwọ ma ọ́ dịkarịa ala? Ị̀ gụruola ebe ahụ? Ọ bụrụ na ị gụrughị ebe ahụ, ọ gaghị adị mma ma ị kwụsị, n’ihi na ọ bụrụ na ị kwụsị, ọ pụtara na ị naghị ‘edo onwe gị n’okpuru ndị ọchịchị’ otú Baịbụl kwuru.—Ndị Rom 13:1.
Ị̀ mụtala ihe ndị ị chọrọ ịmụta n’ụlọ akwụkwọ? Olee ihe ndị ị chọrọ ịmụta n’ụlọ akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị mabeghị ihe ị chọrọ, i kwesịrị ịgba mbọ mata ya. Ma ọ́ bụghị ya, ị ga-adị ka onye banyere ụgbọala ma ọ maghị ebe ọ na-aga. N’ihi ya, gị na papa gị na mama gị kparịta ihe e kwuru n’isiokwu dị n’ala ala, ya bụ, “ Ihe Ndị M Chọrọ Ịmụta n’Ụlọ Akwụkwọ.” Ọ dịghị mma ka ị kwụsị akwụkwọ mgbe ị na-amụtachabeghị ihe gị na papa gị na mama gị kpebiri na ị ga-amụta n’ụlọ akwụkwọ.
Ịkwụsị ịga ụlọ akwụkwọ yiri isi n’ụgbọala wụpụ mgbe ị na-erubeghị ebe ị na-aga
Gịnị mere i ji achọ ịkwụsị? Ụfọdụ n’ime ha nwere ike ịbụ ka i nwee ike kpatawa ego ị ga-eji na-enyere ndị ezinụlọ unu aka ma ọ bụ ka i nwee ike ịna-ewepụta onwe gị enyere ndị ọzọ aka. Ihe ndị na-enweghị isi mere i ji chọọ ịkwụsị ịga akwụkwọ nwere ike ịbụ ka ị gbaara ule ọsọ ma ọ bụkwanụ ka ị kwụsị ime ihe ndị nkụzi unu na-enye gị ka i mee n’ụlọ. Ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịjụ onwe gị ihe mere i ji chọọ ịkwụsị. Ọ̀ bụ ezigbo ihe mere i ji chọọ ịkwụsị ka ọ̀ bụ ihe na-enweghị isi. Ọ bụrụ na ihe mere i ji chọọ ịkwụsị ịga akwụkwọ bụ n’ihi na ị chọrọ ịgbara nsogbu ọsọ, i nwere ike imecha kwaa mmakwaara.
Ịkwụsị akwụkwọ dị ka isi n’ụgbọala wụpụ mgbe ị na-erubeghị ebe ị na-aga. O nwere ike ịbụ na ahụ́ erughị gị ala n’ụgbọala ahụ, ma ọ bụkwanụ na ndị gị na ha nọ n’ụgbọala ahụ na-akpasu gị iwe. Ma, i si n’ụgbọala ahụ wụpụ, ị gaghị eru ebe ị na-aga, i nwekwara ike imerụ ezigbo ahụ́. Otú ahụ ka ọ dịkwa n’ịga akwụkwọ. Ị kwụsị akwụkwọ, o nwere ike isiri gị ike inweta ọrụ. I nwetagodị ọrụ, o nwere ike ịbụ na ego a ga na-akwụ gị agaghị aha ka nke a gaara na-akwụ gị ma a sị na ị gụchara.
Kama ịkwụsị, na-edi nsogbu ndị ị na-enwe n’ụlọ akwụkwọ. I mee otú ahụ, ị ga-amụta otú e si enwe ndidi. Ọ ga-enyekwara gị aka idi nsogbu ndị ị ga-enwe ma ị rụwa ọrụ.
Ihe Ndị M Chọrọ Ịmụta n’Ụlọ Akwụkwọ
Ihe kacha mkpa mere mmadụ ji aga akwụkwọ bụ ka ọ mụta ihe ga-enyere ya aka inweta ọrụ ọ ga-eji na-egbo mkpa ya na nke ezinụlọ ya ma o mechaa nwee ezinụlọ. (2 Ndị Tesalonaịka 3:10, 12) Ì kpebiela ụdị ọrụ ị chọrọ ịrụ na otú ihe ị na-amụ n’ụlọ akwụkwọ ga-esi nyere gị aka ịmụta ya? Zaa ajụjụ ndị a ka ha nyere gị aka ịma ma ihe ị na-amụ n’ụlọ akwụkwọ ọ̀ ga-enyere gị aka n’ọrụ ị chọrọ ịrụ:
Olee ihe ndị m ma eme? (Dị ka ihe atụ, ị̀ ma otú e si eso ndị ọzọ akparịta ụka? Ọrụ aka ò doro gị anya? E nwee nsogbu, ị̀ ma otú e si achọpụta ihe kpatara ya nakwa otú a ga-esi edozi ya?)
Olee ụdị ọrụ m ga-eji ihe m mụtara rụọ?
Olee ụdị ọrụ m nwere ike inweta n’ebe m bi?
Gịnị ka m na-amụ ugbu a ga-enyere m aka inweta ọrụ?
Olee ihe ndị a na-akụzi n’ụlọ akwụkwọ m kwesịrị ịmụ ugbu a ga-enyere m aka ịrụ ụdị ọrụ m chọrọ ịrụ?
Cheta na ihe mere i ji aga akwụkwọ bụ ka ị mụta ihe ga-abara gị uru. Abụla nwa akwụkwọ na-anaghị agụcha agụcha n’ihi na ị chọghị ịrụ ọrụ onye toro eto kwesịrị ịrụ.